Bogga ugu weyn > Waxkasta oo aad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Nikotinamide Riboside Chloride
Sababta aan ugu baahanahay Nikotinamide Riboside Chloride
Warshadaha is qurxinta waa warshadaha bilyan-doolar, ugu horreyntii maxaa yeelay bini-aadamka ayaa ka fajacasan sida ay u eg yihiin. Tani sidoo kale waa qodobka ugu muhiimsan ee sababta cilmi baarista ku saabsan waxyaabaha ka hortagga gabowga iyo waxsoosaarka ay u sameeyeen horumar la yaab leh waqti yar gudaheed. Koongareeska adduunka wuxuu fahmay in ay jirto lacag laga sameeyay rabitaanka shaqsiyaadka ee weligiis da 'ahaan sidaas oo kalena ay leeyihiin kooxo meel ku habboon, ayaamo u dejinaya maalmo iyo usbuucyo si loo helo maaddooyinka iyo waxyaabaha kor u qaadi kara xoojinta maqaarka. Nicotinamide Riboside ama Niagen ayaa laga helay natiijada raadinta aan la xakamayn karin ee alaabada ka hortagga gabowga. In kasta oo badeecooyinka ka hortagga gabowga ay yareeyaan calaamadaha gabowga maqaarka, Niagen waxay yareysaa calaamadaha gabowga jirka dhexdiisa. Nicotinamide Riboside ama Niagen waa qaabka ugu fiican Nicotinamide Riboside Chloride isla markaana jirka gudaheeda, wuxuu isu beddelaa NAD +, kaasoo mas'uul ka ah gabow caafimaad qaba iyo sidoo kale howlo kale oo muhiim ah oo kaladuwan.
Maqaalka, waxaan ka hadlaynaa dhammaan dhinacyada qaabkan la yaabka leh, oo ay ku jiraan faa'iidooyinkiisa, waxyeelooyinka iyo qaadashada habboon.
Waa maxay Nikotinamide Riboside Chloride?
Nikotinamide Riboside Chloride ama Niagen waa qaab qafiif ah oo loo yaqaan 'Nicotinamide Riboside', oo ah fitamiin NAD + ah oo horay loo sii wado. In kasta oo Nikotinamide Riboside culeyskiisu yahay 255.25 g / mol, Nicotinamide Riboside Chloride waa 290.70 g / mol iyo 100 mg oo ah Nicotinamide Riboside Chloride waxay bixisaa 88 mg oo ah Nikotinamide Riboside. NR waxaa loo arkaa mid nabdoon in loo isticmaalo cuntooyinka.
In kasta oo Nikotinamide Riboside ay tahay nooc Fiitamiin B3 ah, haddana dhismaheeda kala duwan ayaa aad uga duwan kuwa badan ee xubnaha kale ka ah kooxda fitamiin B3, sida nicotinamide iyo niacin. In kasta oo Niacin ay keento in maqaarku u soo qulqulo iyaga oo dhaqaajinaya GPR protein-ka receptor-ka, Nikotinamide Riboside wax jawaab ah kama bixineyso soo-dhoweyntan sidaa darteedna xitaa ma keenayso daadashada maqaarka, xitaa marka lagu cuno qiyaasta sare ee qiyaasta daawada 109 mg maalintii. Dheeraad ah, tijaabooyin laga sameeyay jiirarka ayaa shaaca ka qaaday in Nikotinamide Riboside uu yahay NAD + horudhac u horseeday inuu kor u kaco ugu sareeya ee Nikotinamide Adenine Dinucleotide ama NAD + jirka gudahiisa.
Nicotinamide Riboside waxay ku dhacdaa si dabiici ah cunada aadanaha oo mar jirka gudeheeda, waxay isu bedeshaa NAD +, oo jirku u baahan yahay howlo kala duwan. Tusaale ahaan, cilmi baarista saynisku waxay cadeysay in Nicotinamide Riboside Chloride ama NAD + ay bixiso NR ay wanaajiso shaqada mitochondrial iyo sidoo kale dareenka insulinta iyada oo la dhaqaajinayo unugyada kiniiniyada sunta ee jirka, oo mas'uul ka ah hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka jirka.
Illaa iyo hadda, shan daraasadood ayaa la sameeyay si ay u daraaseeyaan badbaadada iyo hufnaanta Nicotinamide Riboside dhammaan daraasadahanna waxay ogaadeen in xarunta ay amaan u tahay isticmaalka aadanaha.
Nicotinamide Riboside Chloride Faa'iidooyinka
Kahor intaanan ka wada hadalno faa'iidooyinka Nicotinamide Riboside Chloride, waxaa muhiim ah in la caddeeyo in maadaama Nicotinamide Riboside Chloride ay tahay cusbada laga helo Nicotinamide Riboside, faa'iidooyinka Nicotinamide Riboside Chloride ay la mid yihiin faa'iidooyinka Nikotinamide Riboside.
●Nicotinamide Riboside Chloride waxay kor u qaadeysaa da'da caafimaadka leh
NAD + oo ay firfircooni geliso Nicotinamide Riboside Chloride gudaheeda waxay ku shaqeysaa enzymes gaar ah oo lala xiriirinayo da'da caafimaad qabka. Mid ka mid ah enzyme-ka noocan oo kale ah waa sirtuins, oo lala xiriiriyay nolosha guud ee la soo rogay iyo nolosha xoolaha ee xayawaanka. Daraasadaha sayniska waxay cadeeyeen in sirtuins ay wanaajiso tayada nolosha iyo cimri dhererka iyadoo la yareynayo bararka, kor u qaadista faa'iidooyinka la xiriira xaddididda kalooriga iyo hagaajinta DNA-da waxyeelo gaartay. NAD + oo ay hawlgasho Nicotinamide Riboside Chloride sidoo kale waxay kicisaa Poly polymerases kaas oo loo yaqaanay inay hagaajiso DNA-ga waxyeelo gaadhay. Dheeraad ah, dhowr daraasadood oo saynis ah ayaa kuxiriiray waxqabadka polymerases-ka iyo cimri dheellitirka kor loo qaaday.
●Waxay Yareyneysaa Mid Ka Mid Fursadaha Uu Ku Yeelanayo Cudurada Wadnaha
Gabowga ayaa waliba kordhiya fursadaha qofku inuu ku bukoodo cudurada wadnaha. Markii dadku sii gaboobaan, xididdadooda dhiigga ayaa noqda kuwo sii dhumuc iyo adag, taas oo iyana, horseedaysa dhiig karka. Marka cadaadiska dhiigga ee maraakiibta uu korodho, wadnuhu waa inuu si laba-laab leh uga shaqeystaa sidii loo soo kicin lahaa dhiigga, kaasoo horseeda cudurada wadnaha ee kala duwan. NAD + oo ay bixiso shirkadda Nicotinamide Riboside Chloride waxay dib ula noqotaa isbeddelada da'da la xiriira ee ku dhaca xididdada dhiigga. Waxaa jira cadaymo badan oo saynis ah oo caddaynaya in Nicotinamide Adenine Dinucleotide ama NAD + aysan kaliya yareynin adkaanta xididdada dhiigga laakiin ay sidoo kale xakameyso cadaadiska dhiigga systolic.
●Nicotinamide Riboside Chloride waxay kaloo siisaa difaac unugyada maskaxda
Nicotinamide Riboside wuxuu ilaaliyaa unugyada maskaxda. Daraasad lagu sameeyay jiirarka ayaa shaaca ka qaaday in wax soo saarka NR-da ee NAD + ay kordhisay wax soo saarka PGC-1 alfa protein illaa 50%. Borotiinka 'PGC-1 alpha' wuxuu ka caawiyaa kahortagga unugyada maskaxda ka hortagga walwalka 'oxidative' sidoo kale wuxuu hagaajiyaa shaqada mitochondrial. Waa, sidaa darteed, in isticmaalka NR ee bini-aadamka uu ka ilaaliyo cudurrada maskaxda ku dhaca da'da, sida Alzheimer iyo Parkinson's. Hal daraasad cilmi baaris oo gaar ah ayaa daraasad ku sameeyay saameynta heerarka NAD + ay ku leedahay dadka qaba cudurka Parkinson's. Daraasada ayaa soo gabagabaysay in NAD + ay wanaajisay shaqada mitochondrial ee unugyada asliga ah.
Faa'iidooyinka kale ee muhiimka ah ee Nikotinamide Riboside Chloride
Ka sokow faa'iidooyinka aan kor ku soo sheegnay, halkan waxaa ku yaal faa'iidooyin dheeraad ah oo dheeri ah oo la xiriira Nicotinamide Riboside Chloride.
NR waxaa loo yaqaanaa inuu sare u qaado xoogga muruqyada, shaqada iyo adkaysiga sidaas darteed, isticmaalka NR wuxuu kuxiran yahay waxqabadka cayaaraha.
Sida kor looga wada hadlay, NR-soo-saarka soo-kicinta ee NAD + wuxuu hagaajiyaa DNA burburay wuxuuna siiyaa difaac kahortaga walaaca sunta. Tani, ayaa iyana, waxay yaraynaysaa fursadda qofku ku qaadi karo kansar.
Daraasad ayaa lagu falanqeeyay saameynta ay leedahay 'Nicotinamide Riboside' ee ku saabsan dheef-shiid kiimikaadka ee jiirka. Daraasadu waxay soo gabagabaysay in NR ay kordhisay dheef-shiid kiimikaadka jiirka. In kastoo loo baahan yahay caddeyn dheeraad ah oo xagga sayniska ah oo arrintan la xiriira, saynisyahano badani waxay rumeysan yihiin in Nicotinamide Riboside ay saameyn la mid ah ku yeelan doonto bini-aadamka sidaa darteedna, waa inay gacan ka geystaan ​​luminta miisaanka.
Qiyaasta Nikotinamide Riboside Chloride Qiyaasta
Shanta daraasadood ee ilaa iyo hada la sameeyay waxay cadeeyeen in Nicotinamide Riboside ay aamin u tahay isticmaalka aadanaha. Si kastaba ha noqotee, daraasaddan ayaa aasaasay aaminka Nicotinamide Riboside Chloride qiyaasta Xadka aadanaha u dhexeeya 1,000 ilaa 2,000 mg maalintii. Si kastaba ha noqotee, waa in maskaxda lagu hayaa in dhammaan daraasadihii lagu falanqeeyey amniga Nicotinamide Riboside ay leeyihiin cabbir muunad aad u yar sidaas darteedna, cilmi baaris dheeraad ah looga baahan yahay aaggan.
Ujeeddada ugu weyn ee Nicotinamide Riboside Chloride waa in ugu horreyn jirka loo siiyo Nicotinamide Riboside Chloride ama Niagen jirka. Niagen ama NR waxaa badanaa lagu heli karaa laba qaab: kiniinno iyo kaabsoosha. In badan oo soo saareyaasha Nicotinamide Riboside waxay isku daraan NR iyo kiimikooyin kale, sida Pterostilbene. Si kasta ha noqotee, si ay u ahaato amaan, inta badan soosaarayaasha wax soosaara ayaa kugula talinaya inaad maalin kasta qaadatid NR inta u dhaxaysa 250 illaa 300 mg maalintii.
Nikotinamide Riboside Chloride Ma Nabdoon tahay?
Daraasado dhowr ah oo ilaa hada la sameeyay ayaa laga helay isticmaalka Nikotinamide Riboside ee u dhexeysa 1000 ilaa 2000 mg maalin kasta oo aamin ah isticmaalka aadanaha. Si kastaba ha noqotee, maadaama daraasado dheeraad ah oo la taaban karo looga baahan yahay aaggan, soo-saareyaasha Nicotinamide Riboside waxay kugula talinayaan in qofku maalin walba qaato NR ee ka hooseeya 250-300 mg maalin kasta.
In kasta oo isticmaalka Nikotinamide Riboside ama Nikotinamide Riboside Chloride ay aamin tahay, waxay kuu horseedi kartaa waxyeelo sida lallabbo, madax xanuun, calool xanuun, daal iyo shuban. Haddii aad isku aragto mid ka mid ah astaamahan inta aad qaadaneyso kabitaanka NR, isla markiiba la tasho dhaqtarkaaga. Intaa waxaa dheer, maadaama aysan jirin caddeyn ku filan oo ku saabsan saameynta Nikotinamide Riboside ee haweenka uurka leh iyo kuwa naasnuujinaya, kooxdani waa inay ka fogaato isticmaalka Nikotinamide Riboside supplements.
Nicotinamide Riboside Chloride Supplement
Haddii aad raadineyso khudradda Nicotinamide Riboside Chloride dhamaystirid, waxaan kugula talineynaa Tru Niagen Nicotinamide Riboside dheeri ah. Kordhintaani waxay adeegsaneysaa NIAGEN, shirkadda soo-saartey shirkadda 'NR'. Shirkadda waxsoosaarka waxay la macaamiltaa kaliya cuntooyinka 'Nicotinamide Riboside' sidaa darteedna, qofku wuxuu ku nasan karaa in kabiddyada ay sameysay shirkadda ay tayo sare leh. Dheeraadka "Tru Niagen Nicotinamide Riboside" wuxuu ku yimaaddaa kaabso-dhib yar, oo si fudud wax loo liqo. Isticmaalayaasha waxaa looga baahan yahay inay qaataan hal kabasho oo keliya maalintii.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadinayso gluten, ukunta, BPA, nuts, waxyaabaha waxyaabaha lagu keydiyo iyo waxyaabaha caanaha ka sameysan, waxaan kugula talineynaa inaad lacagtaada ku darto kabitaanka Thorne ResveraCel Nicotinamide Riboside. Dheeraadkan ayaa isku daraya NR iyo flavonoids. Wadajir ahaan, labadan kor u qaadista waxqabadka sirtuin. Waxaa taas ka sii muhiimsan, Thorne ResveraCel ayaa sheeganeysa inay sameyso afar wareeg oo tijaabo ah mid kasta oo ka mid ah kaabayaasheeda sidaas darteedna, kaabsashada shirkaddu ay si buuxda u amaan tahay. Dheeraad ah, kabitaannadaas waxaa lagu soo saaray xarun la aqoonsan yahay oo ku taal gudaha Mareykanka iyo xarun laga aqoonsan yahay TGA Australia.
Halkee Iibsataa Nicotinamide Riboside Chloride Powder ee Bulk?
Baahida loo qabo kabitaannada Nikotinamide Riboside ayaa si aad ah u kordhay sannadihii la soo dhaafay, ugu horreyntii Nicotinamide Riboside waxay leedahay faa'iidooyin badan. Haddii aad raadineyso inaad u dhaqaaqdo suuqa Nikotinamide Riboside supplements, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad naftaada u noqdaa mid ku kalsoon oo aamin ah alaab-qeybiyeyaasha alaabta ceeriin. Halkee u iibsadaan Nicotinamide Riboside Chloride budada guud ahaan? Jawaabtu waa Cofttek.
Cofttek waa alaab-qeybiye alaabta ceeriin ah oo soo nooleyd 2008 isla markaana muddo toban sano gudahood ah, shirkaddu waxay ka asaasay jiritaankeeda dalal dhowr ah. Waxa kale oo aan ahayn soo saarista alaabada la isku halleyn karo, shirkadda waxaa sidoo kale diiradda lagu saarayaa sidii ay horumar uga sameysan lahayd cilmiga bayoolaji, teknolojiyadda kiimikada iyo tijaabada kiimikada. Shirkadda ayaa sidoo kale ka go'an samaynta cilmi-baaris tayo leh, taas oo siinaysa inay ka fiicnaato alaab-qeybiyeyaasha kale ee suuqa. The Budada Nikotinamide Riboside Chloride ay soo bandhigtay shirkadu waxay kuxirantahay xirmooyin 25 kgs ah waana lagu kalsoonaan karaa tayada. Intaa waxaa sii dheer, shirkaddu waxay leedahay iibsi aad u fiican iyo kooxda taageerada macaamiisha oo daryeeli doona dhammaan baahiyadaada iyo weydiimaha waqtiga-dhabta ah. Tani, haddii aad rabto inaad iibsato budada Nikotinamide Riboside Chloride, ku aamin kaliya Cofttek.
Conze, D., Brenner, C. & Kruger, CL Badbaadada iyo Dheef-shiid kiimikaad ee Maamulka muddada-dheer ee NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) oo kujira Randomized, Double-Blind, Posbo-Kontrol Clinical Trial of Healthy Adweight Health Adult Adult. Sci Rep9, 9772 (2019)
Carlijn ME Remie, Kay HM Roumans, Michiel PB Moonen, Niels J Connell, Bas Havekes, Julian Mevenkamp, ​​Lucas Lindeboom, Vera HW de Wit, Tineke van de Weijer, Suzanne ABM Aarts, Esther Lutgens, Bauke V Schomakers, Hyung L Elfrink, Rubén Zapata-Pérez, Riekelt H Houtkooper, Johan Auwerx, Joris Hoeks, Vera B Schrauwen-Hinderling, Esther Phielix, Patrick Schrauwen, Nikotinamide kordhinta riboside waxay wax ka badashaa isku jirka jirka iyo muruqyada acetylcarnitine muruqyada ee caafimaadka bina aadamka. Somali Journal of American Nutrition Clinical, Mugga 112, Cadadka 2, Ogosto 2020, bogagga 413–426
Elhassan, YS, Kluckova, K., Fletcher, RS, Schmidt, MS, Garten, A., Doig, CL, Cartwright, DM, Oakey, L., Burley, CV, Jenkinson, N., Wilson, M., Lucas , S., Akerman, I., Seabright, A., Lai, YC, Tennant, DA, Nightingale, P., Wallis, GA, Manolopoulos, KN, Brenner, C.,… Lavery, GG (2019). Nicotinamide Riboside wuxuu sixiraayaa Muruqa Skeletal Murqaha Aadanaha ee NAD + Metabolome iyo Induces Transcriptomic iyo Saxiixa anti-bararka. Warbixinnada Cell, 28(7), 1717-1728.e6.
Budada Nikotinamide Riboside Chloride
1. Maxaan ugu baahanahay Nikotinamide Riboside Chloride
2.Waa maxay Nikotinamide Riboside Chloride?
3.Nicotinamide Riboside Chloride Faa'iidooyin
4.Nicotinamide Riboside Chloride Qiyaasta
5.Maya Nikotinamide Riboside Chloride Ma Nabdoon tahay?
6.Nicotinamide Riboside Chloride Supplement (Kaabid chloride)
7. Xagee laga iibsadaa Nikotinamide Riboside Chloride Powder ee Bulk?
Cofttek waxaa la helay sanadkii 2008, waa shirkad casriyeysan oo ah Cuntada Dheeraadka ah ee Cuntada isku dhafka ah ee isku darka wax soo saarka, R&D iyo iibka.
OLEOYLETHANOLAMIDE (OEA) –CARTA SIXIRKA AH EE NOLOSHAADA
Faa'iidooyinka ugu sareeya 12 Anandamide (AEA) ee Caafimaadkaaga